Isiokwu | January 2020
Esi tinye Adobe Flash Player na kọmputa gị
Editor Si NhọRọ January 21,2020
Wepụ ihe omume Windows 10
06/27/2018 Windows | maka mmalite | mmemme Na ntuziaka a maka ndị ịmalite, ọ bụ nkọwa zuru ezu ebe ị ga-esi wụnye na iwepụ ihe omume Windows 10, otu esi abanye na mpaghara a nke ogwe ntụle na ozi ndị ọzọ gbasara esi ewepụ ihe omume Windows 10 na ngwa sitere na kọmputa gị.
Ịhazi ndị nhazi
Ịtọlite ​​router Wi-Fi Nkọwa zuru ezu banyere ịmepụta ndị na-eme Wi-Fi nke ụdị ndị kachasị ewu ewu maka ndị isi na-enye Russia. Nduzi maka ịtọlite ​​njikọ Ịntanetị na ịmepụta netwọk Wi-Fi. Ọ bụrụ na ịnweghị Wi-Fi, Ịntanetị adịghị arụ ọrụ na laptọọpụ site na Wi-Fi, ngwaọrụ anaghị ahụ ebe ọhụụ, yana nsogbu ndị ọzọ mgbe ị na-edozi router Wi-Fi, ị ga-ahụ: Nsogbu na ịmepụta Wi-Fi.
Ezi Afọ Ọhụrụ 2014! Ana m enye onyinye.
Na-achịkọta nkesa onyinye! (Ka m na-ekesa ha na ederede nke mbido mbụ dị n'okpuru akwụkwọ a). Iju, ma nani mmadụ atọ chọrọ inweta onyinye, ọ bụ ezie na ọnụ ọgụgụ nke feedburner, ihe karịrị ndị debanyere 50 bịara ịgụ isiokwu a. N'ihi ya, ekpebiri m na agaghị m etinye onyinye abụọ, dịka e mere atụmatụ na mbụ, mana inye akwụkwọ atọ niile ndị na-agụ akwụkwọ chọrọ ka ha bụrụ onyinye: Sergey, akwụkwọ Michael Kofler - Linux.
N'ebe a, ị nwere ike ịchọta ihe niile dị na Windows 7 na Windows 8.1 OS banyere nhazi, nhazi, arụ ọrụ OS, mgbake usoro, nkwụsị nsogbu na nuances ndị ọzọ. Na ibe dị iche - Ntuziaka maka Windows 10 Dị mkpa: Ịwụnye Windows 8.1 Ụlọ ọrụ nke arụ ọrụ n'ime Windows 10, 8 na Windows 7, nke bara uru ịmara Otu esi budata mbido mbụ nke Windows 8.
Ya mere, ọ bụrụ na egwuregwu Crysis 3 adịghị amalite ma njehie na-egosi na mmalite nke usoro ihe a agaghị ekwe omume n'ihi eziokwu ahụ achọrọ aeyrc.dll faịlụ adịghị na kọmputa, ebe a ka m ga-agwa gị ihe ị ga-eme iji dozie ya. Nsogbu yiri ya: cryea.dll na-efu na Crysis 3 Ọ bụrụ na ị malite ịchọ ebe ị ga-ebudata aeyrc.
"Njehie Nzuzo" - nsogbu kọmputa enweghị atụ
Agụrụ m ya na wired ma kpebie ịsụgharị. N'ezie, isiokwu ahụ bụ eziokwu nke Komsomol, mana ọ nwere ike ịmasị. Ihe dị ka otu afọ gara aga, Stephen Jakisa nwere nsogbu dị njọ na kọmputa ya. Ha malitere mgbe ọ na-arụ ọrụ Agha 3 - onye na-agba égbè mbụ, bụ nke ihe a na-eme na nso nso.
Ebee ibudata vorbisfile.dll na otu esi etinye ya
Njehie jikọtara faịlụ vorbisfile.dll nwere ike ịpụta na Windows 7, Windows 8 na XP na ọ bụrụ na ị hụ ozi sitere na sistemụ arụmọrụ na enweghi ike ịmalite ihe omume ahụ n'ihi na kọmputa ahụ enweghị vorbisfile.dll, mgbe ahụ ị ga-achọ na-agba ọsọ GTA San Andreas (Otú ọ dị, njehie nwere ike ịpụta mgbe ị na-amalite mmemme ma ọ bụ egwuregwu ndị ọzọ, dịka ọmụmaatụ, Homefront).
Ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala na Sony Vaio
03/03/2013 Laptọọpụ | dị iche iche | usoro Ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala niile na Sony Vaio laptọọpụ bụ ọrụ na-adịghị mkpa, nke ndị ọrụ na-eche ihu. Enyemaka - ọtụtụ isiokwu na-akọwa maka ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala maka nsogbu, nke, ọ dị mwute ịghara ịrụ ọrụ mgbe niile.
Ntinye site na windo mbanye
Ntuziaka zuru ezu na nduzi na ụzọ dịgasị iche iche iji mepụta ngwa ngwa mpempe akwụkwọ maka nhazi nke Windows na sistemụ arụmọrụ ndị ọzọ, yana ịgbanye kọmputa site na windo mbanye. A ga - emelite ndepụta nke ntuziaka, n'oge ahụ, a na - atụle ịmepụta eriri USB maka ịwụnye nsụgharị Windows dịgasị iche iche site na eriri flash USB.
Torrent - ntuziaka maka ojiji
Nke a ga-enwe ihe niile na ntụziaka site na remontka.pro metụtara ibudata site na iyi, ndị na-egwu egwu mmiri, ihe netwọk na-arụ ọrụ faịlụ na otú e si eji ya. Kedu ihe bụ iyi na otu esi eji ya - ntụziaka maka ndị ọrụ nyocha maka ọrụ netwọk Bittorrent, ihe iyi na tracker bụ, yana onye ahịa mmiri.
Obere ihe banyere ọrụ nchekwa na kọmputa
Ị maara na ịkụga bọtịnụ dị iche iche dị mgbagwoju anya na ebe nrụọrụ weebụ abụghị ọrụ kasị dịrị nchebe na-arụ ọrụ na kọmputa? Ọtụtụ nsogbu kọmputa, nje na ihe yiri ya na-apụta dị ka ihe si na ọchịchọ ịmata oke. Ọfọn, mụ onwe m na-achọ ịmata ihe pasent nke ndị na-agụ ga-enweta na ibe a (ọ bụrụ na ị kụrụ ya site na ọchụchọ, mgbe ahụ, ọ bụrụ na m ga-eme ka ị mara na bọtịnụ a na-achụpụ site bọtịnụ na-ekwu bọtịnụ nzuzo).
Etu ibudata d3dx11_43.dll site na weebụsaịtị Microsoft
Ọ bụrụ na ịmaliteghị egwuregwu ahụ na ịnweta njehie d3dx11_43.dll (nke m chere na ọ bụ, ebe ọ bụ na ị nọ ebe a), mgbe ahụ, na rịọ dị ka "budata d3dx11_43.dll maka n'efu" ị ga-akacha nweta saịtị dị ka faịlụ dll, Download faịlụ, tinye ya na nchekwa C: System32 na ... ọ gaghị arụ ọrụ gị.
Ntuziaka zuru ezu banyere otu esi emebe mwepụ na ọgwụgwọ nje na kọmputa gị. Na ọgwụgwọ nke ngwa ngwa flash maka nje virus, iji antiviruses wepụ malware na akwụkwọ ntuziaka ndị ọzọ metụtara ikpochapụ nje. The best antivirus for Windows 10 (ugwo na free) Nke kacha mma free antiviruses Ụzọ kachasị mma isi wepu malware site na komputa gị Esi wepu mgbasa ozi na ihe nchọgharị na mmapụta. maka nje virus Iji RogueKiller ịchọta ma wepu mmemme obi na achọghị. Nbudata ịntanetị nke faịlụ maka nje na Hybrid Analysis Otu esi eji onye nche Windows kwadoro (Windows Defender Offline) Free Antivirus na Bitdefender Free Edition maka Windows 10 Olee otú iji wepu funday24.
Android - ntuziaka na nchọpụta nsogbu
Na ibe a ị ga-ahụ ihe niile dị na saịtị a maka iji dozie nsogbu na ụzọ dị mma maka iji mbadamba gam akporo na ekwentị. A ga - emelite ndepụta nke ntuziaka dịka ndị ọhụrụ ga - apụta. Enwere m olileanya na ọtụtụ n'ime ha ga-adọrọ mmasị ma bara uru maka ndị nwe ụdị ngwaọrụ ndị a.
Ebee ka ibudata mfc100u.dll ma dozie njehie mgbe ịmalite usoro ihe omume ahụ
I kwesiri iche na i nwere njehie na Windows: enweghi ike ibido ihe omume a n'ihi na mfc100u.dll faịlụ adighi na komputa. N'ebe a, ị ga-ahụ ụzọ iji dozie njehie a. (Nsogbu ọsọ maka Windows 7 na ihe omume Nero, AVG antivirus na ndị ọzọ) Nke mbụ, Achọrọ m ịma na ị gaghị achọ ebe DLL a dị iche: nke mbụ, ị ga-ahụ saịtị dịgasị iche iche a jụrụ ajụ (na ị maghị ihe na mfc100u.
Esi edozi errorxcudart_20.dll
Ọ bụrụ na mmalite nke egwuregwu (nke ikpeazụ, nke a bụ Borderlands), njehie na-egosi na mmalite nke usoro ihe omume agaghị ekwe omume, n'ihi na faịlụ dị mkpa na-efu na kọmputa ahụ, achọla ebe ị ga-ebudata physxcudart_20.dll, dozie njehie dị mfe karị. Enweghi ụdị nchịkọta physxcudart_20.dll na NVidia PhysX, ya bụ, nanị wụnye PhysX adịghị edozi njehie (dị ka ọmụmaatụ, ị nwere ike idozi njehie physxloader.
Esi weghachite ndekọ Windows 10, 8 na Windows 7
12/29/2018 Windows | mmemme Ndenye Windows bụ otu n'ime akụkụ kachasị mkpa nke sistemụ arụmọrụ, nke bụ nchekwa data nke usoro na usoro mmemme. Ọkwa OS, ntinye ngwanrọ, iji tweakers, "Cleaners" na ihe omume ndị ọzọ na-eduga ná mgbanwe na ndekọ ahụ, nke, mgbe ụfọdụ, nwere ike iduga na arụmọrụ usoro.
Skype (ma ọ bụ Skype na Russian) bụ otu n'ime ihe omume kachasị ewu ewu maka nkwurịta okwu na Intanet. Na Skype ị nwere ike ịgbanwe ozi ederede, mee ka olu na oku vidiyo, mee oku gaa na ala na ekwentị mkpanaaka. Na ebe nrụọrụ weebụ m, m ga-agbalị ide ntụziaka zuru ezu banyere akụkụ nile nke iji Skype - ọtụtụ mgbe, ndị a na-adịghị anya na kọmputa na ihe niile metụtara ha ma ha chọrọ nduzi zuru ezu.
Msvcp110.dll na-efu site na kọmputa - otu esi ebudata ma dozie njehie ahụ
Ọ bụrụ na ịmalite usoro ihe omume, ma mgbe mgbe egwuregwu, dịka ọmụmaatụ, Agha 4 ma ọ bụ Mkpa Iji Rivals, ị na-ahụ ozi na enweghị ike ịmalite mmemme ahụ n'ihi na kọmputa ahụ enweghị msvcp110.dll ma ọ bụ "Ngwa ahụ enweghị ike ịmalite n'ihi MSVCP110.dll achọtaghị ", ọ dị mfe ịkọ ihe ị na-achọ, ebe ị ga-enweta faịlụ a na ihe mere Windows ji ede na ọ na-efu.
Ịdebanye aha na enyemaka kọmputa n'efu nye ndị debanyere aha
M ga-enwe obi ụtọ ma ọ bụrụ na ị denye aha na akwụkwọ ọhụrụ nke ihe ọhụrụ site na saịtị remontka.pro. Agaghị m ezitere ihe nkwado, ọ dịghị ma e wezụga isiokwu metụtara kọmputa na-ebipụta na saịtị m. Nhọrọ ndebanye aha Na kọntaktị Ekwentị mkpanaka Twitter Facebook Youtube Yandeks.Dzen RSS feed Ịdenye aha site na E-mail Ndenye aha ọhụrụ, mgbe ụfọdụ na-akpali ma bara uru, ihe nke saịtị ahụ.
Tinye paswọọdụ na ngwa na iPhone
Anyị na-ewepu iwe na Microsoft Word
Ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na faịlụ EXE adịghị agba ọsọ
N'agbanyeghị na Apple na-etinye iPad ka ọ bụrụ ngbanwe zuru ezu maka kọmputa, ngwaọrụ a ka na-adabere kpamkpam na kọmpụta ahụ, dịka ọmụmaatụ, mgbe ana-ekpochi ya, ọ ga-ejikọrọ ya na iTunes. Taa, anyị ga-enyocha nsogbu ahụ mgbe, mgbe ejikọrọ na kọmputa, iTunes adịghị ahụ iPad. GụKwuo
Gbanwee asụsụ Russian na YouTube
Ịghọta ihe ederede site na mbido ahụ na-eji ABBYY FineReader
https://termotools.com ig.termotools.com © Isiokwu 2020